Nissan na-enye slippers ndị mbụ “kwụba” onwe ha | Akụkọ akụrụngwa
Nissan na-enye slippers mbụ nke "kwụ" onwe ha
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta akpụkpọ ụkwụ gị na-agba agba ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ ị ga-anọ gburugburu ụlọ ahụ, nke a maara dị ka slippers, ga-agabiga, ọ ga-abụ na ụlọ ọrụ Nissan abụghị otu nhọrọ ị ga-atụle, ọbụlagodi ruo ugbu a. The automaker Nissan, ọkọnọ, na a ga-ire na n'oge na-adịghị, ụfọdụ slippers na ka ị na-ewepụ ha ka ha pụọ ​​n'okporo ámá "ogige" naanị ha. O yikarịrị, ọ dịkarịa ala n'ọtụtụ oge, mgbe anyị wepụsịrị slippers anyị ịhapụ ụlọ, anyị na-ewepụ ha n'akụkụ ma ọ bụ na-atụsasị anyị n'ike. Na Japan, ọtụtụ ụlọ na-enye anyị slippers anyị ga-eyiri tupu ha abanye n'ụlọ.
N'ezie, Nissan enweghị ebumnuche ịbanye n'ahịa akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụ ngwa, mana yana teknụzụ a, nke nwekwara ike itinye ya na ihe ndị ọzọ dị n'ụlọ anyị dị ka oche, tebụl ma ọ bụ oche, ọ chọrọ ịpụpụta teknụzụ kwụ ọtọ na-enye site na ugbo ala ya, dika akwukwo ohuru Nissan, ihe kwurula ebe a na-adọba ụgbọala nke na-ahụ maka ịpasa ụgbọ ahụ na oghere mbụ ọ na - achọta.
Nke a abughi oru mbu nke Nissan iji nye ndi mmadu ihe ndi ozo. N’afọ 2016, ụlọ ọrụ ahụ haziri tebụl na oche ndị, mgbe ha chọpụtara na ọ nweghị onye bi ha e nyere ha iwu n'okpuru tebụl, ọ bụghị naanị iji mee ka udo dị, kamakwa iji belata ohere ha nwere. N'ihe gbasara slippers, o yikarịghị ka a ga-ere slippers ndị a n'èzí Japan, mana dị ka ụdị ọrụ "ọchịchọ" ọ bụla ọzọ, enwere ike ire ha na mba ndị ọzọ. Oge ga-agwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nissan na-enye slippers mbụ nke "kwụ" onwe ha
Intel na-arụ ọrụ ugbu a na nhazi ndị na-enweghị Specter na Meltdown
Nke a bụ otú o si eji ọkụ ọkụ nke Elon Musk chọrọ ire